GreenKhabar – के तपाई केस झरेर चिन्तित हुनुहुन्छ ?
in मूलपेज / स्वास्थ्य / हरित उद्यम / हरित खबर — by GreenKhabar —	February 22, 2017
के तपाई केस झरेर चिन्तित हुनुहुन्छ? कपाल झरेर झर्दै गरेको कपाललाई मजबुत तथा कालो र बाक्लो बनाउन चाहनुहुन्छ। यदि हुनुहुन्छ भने प्याजको रस प्रयोग गर्नु निक्कै उपयुक्त हुन्छ। किनकी यसमा धेरै चमत्कारीक गुण पाइन्छ। कपाल झर्ने, समय नबढ्दै सेतो हुने, चायाँको समस्या धेरैले हुने गरेको छ। कपालको यस्तो समस्यालाई प्याज एक बरदान हो। किनकी यसले कपालको सम्पूर्ण समस्यालाई समाधान गर्दछ।
प्याज प्राय धेरै मानिसको पहुँचमा हुने पदार्थ हो। यसमा रहेको सलंपर नामक मिनरल धेरै मात्रामा हुने गर्दछ जसले कपालको विकासको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ। एउटा प्याले कपाललाई दोब्बर बढाउन सक्ने क्षमता राख्‍दछ। यो पक्रियामा कपालको विकासमा जीनमा पनि भरपर्छ।
कपाल झर्ने देखि रोक्‍नसम्‍मको लागि प्याजलाई प्रयोग गर्न सबैभन्दा उत्तम यी उपायहरु अपनाउनुस् :
तीन चार प्याज काट्‍नुहोस।
राम्रो तरिकाले पिस्नुहोस
पिसेपछि त्यसबाट रस निकाल्नुसहोस
अब रसलाई आफ्नो कपालमा लगाउनुहोस्
करीब आधा घण्टासम्म कपालमै राख्‍नुहोस्
एउटा हल्का स्याम्पूसग कपाल पखाल्‍नुस्
करीब हप्तामा ३ पटक यो विधि अपनाएमा तपाईलाई सही परिणाम आउनुहुनेछ। तर तुरुन्तै भने धेरै परिवर्तन आउन नसक्ने बताइएको छ।